Nsọpụrụ ụbọchị: ịdị oke ọnụ nke nkwuputa | EKPERE NA OZI
Nsọpụrụ ụbọchị: ịdị oke ọnụ nke nkwupụta
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 24, 2020 Ọktoba 24, 2020
Ihe bara uru. Chee echiche ihe ọghọm gị ga-abụ ma ọ bụrụ na, ị daba n'ime otu mmehie na-anwụ anwụ, ị ga-efu efu na-enweghị ọgwụgwọ the N'ime ọtụtụ ihe egwu, ndị na-esighi ike ịjụ, ụdị ọdachi ahụ nwere ike irikpu gị n'ụzọ dị mfe. Ndi mo-ozi, ya mere ndi mmuo di ebube, achọtaghi uzo ozo site na nmehie ha; ma gị, na aka nke ọzọ, na Nkwupụta, na-ahụta ọnụ ụzọ mgbaghara mgbe niile, ọbụlagodi mgbe otu narị mmehie gasị… Lee ka Jizọs si dị mma nye gị! Ma olee otu i siri nwee ekele maka Sakrament a?
Mfe ya. Chineke, maka otu mmehie Adam, chọrọ narị afọ itoolu na karịa na nchegharị! Ndi azu gha akwughachi ya na oku ebighebi, ugwo nke otu nmehie nke inwu anwu. O nwere ike buru na Jehova na-enye gi nmehie nke ogologo oge, tupu ichupu gi! Ezi nchegharị, Nkwupụta nke mmehie gị na ntakịrị ntaramahụhụ ezuola maka ya, a gbagharala gị. Do chere na o siri ike? Are gbụrụ gị ikwupụta?
Nkwupụta mmehie! N't gaghị abụ otu n’ime mkpụrụ obi ndị ahụ, n’ihi ụjọ maka ịbụ onye a ma ama ma ọ bụ onye a na-akọcha, maka ihere nke mmehie ochie ma ọ bụ nke ọhụụ, agaghị anwa anwa kwuo ihe niile? Ichoro igbanwe balsam ka obu nsi? Chee echiche banyere ya: ọ bụghị Chineke ma ọ bụ onye nkwuputa ka ị na-emehie, kama gị onwe gị. Gaghị abụ otu n’ime ndị na-ekwupụta na omume ha, n’enweghi ihe mgbu, n’enweghi nzube, na enweghi ndepụta? Chee echiche banyere ya: ọ bụ mmejọ nke Sacrament, ya mere mmehie karịa!
OMUME. - Nyochaa ụzọ nkwupụta gị; na-akọrọ ndị nsọ niile Pater atọ.
Nke gara aga Post Gara aga post:Chee echiche banyere taa ma ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa ikwe ka Jizọs "kọọ ala" gị
Next Post → Post ozo:Okwukwe na nchegbu anaghị agakọ